ဤစာတမ်းတွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု အရွေ့သည်အမျိုးသား ရေးအခြေခံစိတ်အပေါ် နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အလို့ငှာ အသုံးချရန် ကြိုးစားလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဖြစ်စဉ်တခုဖြစ်သည်ကို မြန်မာဘုရင် အုပ်ချုပ်ရေးကာလ၊ ကိုလိုနီခေတ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကိုလိုနီခေတ်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ ဂျပန်ခေတ် စစ်ပြီးခေတ် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ‌ခေတ် (၁၉၄၈ – ၁၉၆၂)၊ အိမ်စောင့်အစိုးရ လက်ထက် (၁၉၅၈-၁၉၆၀)၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဥ်ပါတီခေတ် (၁၉၆၂-၁၉၈၈)၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ခေတ် (၁၉၈၈-၂၀၁၀)၊ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလ၊ နှင့် အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်များ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ၂၀၁၂ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလများ နောက်ပိုင်းအထိဖြစ်စဉ်များကိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါသည်။ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြရာတွင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြဿနာများကို လူမှု စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်အပေါ်အခြေခံဖြစ်ပေါ်သည့် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ပြဿနာများအဖြစ်ယူဆခြင်းမပြုပဲနှစ်ပေါင်း ရှည်ကြာစွာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တရားမမျှတမှုတို့အား ဆန့်ကျင်ရုန်းကန်သည့် လှုပ်ရှားမှုများမှပေါက်ခဲ့ ရသည့် ပြဿနာများအဖြစ်ရှုမြင်ကာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ဆောင်များ ကိုယ်တိုင်ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ ပါသည်။
This paper discusses the shifts in Burmese political culture that were predominantly caused by political spirits of nationalism. The study covers the political developments from the Myanmar dynastic era up to the growth of fundamental religious nationalism after the 2012 by-election. The paper concludes that the political elites in Myanmar should not regard ethnic and religious conflicts asaresult of clashing economic interests among the different communities, but that they are caused by struggles against structural injustice deeply rooted in Myanmar society.
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အမျိုးသားရေးအမှတ်သညှာများ၊ ယဥ်ကျေးမှု အမှတ်သညှာများအပေါ် အခြေခံသည့် အတွေးအခေါ်များ၊ တန်ဖိုးထားမှုများအပေါ် အခြေခံသည့် စီးပွားရေးနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု များ အားကောင်း မောင်း သန်ပေါ် ပေါက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဥ်များစွာ ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကိုလိုနီပြုခြင်း၏ အခြေခံပြသနာ အဖြစ် လုပ်အားစျေးကွက်၊ ကုန်စည်စျေးကွက်များပါဝင်သည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်ချက်ကိုထင်ရှား စွာတွေ့မြင်ရသော်လည်း၊ ခွဲခြားမှုများတွဲဆက်ပါဝင်နေသည်ကို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကဲ့သို့ ယဥ်ကျေးမှုကဏ္ဍ များတွင်လည်း တွေ့ရှိရသည်။ လက်အောက်ခံ နိုင်ငံများသို့ ယဥ်ကျေးမှုတင်သွင်းခြင်းကို ကိုလိုနီအစိုးရများမှ ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခြင်းများ ရှိသကဲ့သို့ ကိုလိုနီနိုင်ငံများအကြား အစိုးရ၏ အစီအစဥ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအစီအစဥ်ဖြင့် လည်းကောင်း ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်အခြေချမှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ယဥ်ကျေးမှုပေါင်းစည်း ဖြစ်တည်မှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။ ဥပမာ။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားများ ဝင်ရောက်၍ လယ်ယာစီးပွားရေး တွင် ပါဝင်ဆောင် ရွက်ခြင်း။
လွတ်မြောက်‌ရေးလှုပ်ရှားမှုများသည်လည်း အမျိုးသားရေးဆောင်ပုဒ် များ၊ အမျိုးသားရေးရည်ရွယ်ချက်များ အပေါ်အခြေခံသည့် လှုံဆော်စည်းရုံးမှုများဖြင့် အတူပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများသည် တိုင်ပြည်တခုချင်းစီ၏ စာပေ၊ ယဥ်ကျေးမှုအပါအဝင် နိုင်ငံ သားတို့၏ တွေးခေါ်မှုခံယူချက်နှင့် နိုင်ငံရေးအမြင်တို့ ကိုပပါ သက်ရောက်စေခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် လက်သီးသူပုန် ( ၁၈၉၉ – ၁၉၀၁) ကြောင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် တရုတ်ရိုးရာ ဆေးပညာ၊ သိုင်းပညာ၊ စစ်ပညာ စသည်တို့ အားကိုယ်စားပြုသည့် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်များ ပါဝင်သည့် ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ်၊ ကဗျာတို့သည် ယနေ့တိုင် ပင်ဆက်လက် လွမ်းမိုးလျက်ရှိသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကိုလိုနီခေတ် လက်အောက်ခံနိုင်ငံများနှင့် အုပ်စိုးသူ နိုင်ငံတို့အကြား လက်နက်၊ နည်းပညာ၊ ဘဏ္ဍာ‌ရေးဆိုင်ရာ ကွာခြားမှုများကို အမျိုးသားရေး စိတ်အားအသုံးပြု တန်းညှိခဲ့ကြသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သည် အမျိုးသားရေးလှိုင်း အားအကောင်းဆုံးအချိန်၌ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စရပ်ဆိုင်ရာ အကောက်အယူမှန်သမျှကို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ ယဥ်ကျေးမှု များအပေါ် မှ သာချဥ်ကပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အခိုက်အတန့်အဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် တည်ရှိပြီးဖြစ်သည့် သာမာန်လူထု၏ အမျိုးသားရေး တန်ဖိုးထားမှုကို နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အတွက် လွှဲပြောင်းသုံးစွဲမှု၏ အောင်မြင် မှု သက်သေပင်ဖြစ်သည်။ တပြိုင်နက်ပင် အမျိုးသားရေးအစွန်ရောက်အတွေးအခေါ်၏ ကြီးမားသည့်အန္တရာယ် ရှိမှုကို လည်း ညွှန်းဆိုသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအနေဖြင့် အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်မှုနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအတွေး အခေါ်၏ ကြီးမားသည့် သက်ရောက်မှုအပေါ် သတိထားတုံ့ပြန်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြပြီး ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အ ရေး ကြေငြာစာတမ်းသည် လူမျိုးကြီးဝါဒနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို တာမြစ်တုံ့ပြန်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြခြင်း သက်သေ ပင်ဖြစ်သည်။
လူမျိုးပေါင်းစုံနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်လျက်ရှိပြီး အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်တို့၏ သိမ်းပိုက်ခြင်းခံခဲ့ရ သည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အမျိုးသားရေး ဝါဒ အပေါ်အခြေခံသည့် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဥ်များနှင့် အသားကျပြီးဖြစ် သည်။ ကိုလိုနီနိုင်ငံတခုအဖြစ် ဗြိတိသျှတို့၏ အန္ဒိယအင်ပါယာ အတွင်းသို့သွပ်သွင်းခြင်းမခံရမီ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟု သက်မှတ် ချက်ခံထားရသည့် နယ်နမိတ်များသည် မြန်မာမင်းအုပ်ချုပ်မှု အောက်သို့ အလုံးဆုံကျရောက်နေကြ သည် မဟုတ်ပေ။ ကိုယ် ပိုင်ယဥ်ကျေးမှု အမှတ်အသားများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များ၊ ကိုးကွယ်မှုဓလေ့များ၊ လူမှု ရေး ထုံးတမ်းစဥ်လာများ သီးခြားစီ အခိုင်အမာရှိခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင်သာ ထိရောက်သည့် မြန်မာ့ဘုရင့် အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်သက်ရောက်၍ ထိုခေတ်က ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကန့် သက်ချက်များအရ ပုံမှန်အုပ်ချုပ်ရေး ထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ ပဏ္ဍာဆက်နယ်များ၊ သစ္စာခံနယ်များ အဖြစ်သာရှိ ခဲ့သည်။ ကုန်ဘောင်မင်းဆက်သည် လက်ရှိ မြန်မာ့နယ်နမိတ်တွင် နေထိုင်ကြသည့် လူမျိုးများထက် ပိုမိုအင်အား သာလွန်သည့် အတွက် လက်အောက်ခံများသဖွယ် နေထိုင်ခဲ့ကြရသည်သာဖြစ်၍ နိုင်ငံရေး အရ စနစ်တကျပေါင်း စည်းရန် သဘောတူညီထားမှုမရှိ ခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် ကာလတချို့တွင်မူ ပုံကန်ခြားနားခြင်း၊ အမိန့်မနာခံခြင်း၊ အခွန် ငြင်းပါယ်ခြင်းစသည့် ပြဿနာများ အပေါ် တွင် စစ်မက်များ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ကိုလိုနီခေတ်အုပ်ချုပ်ရေးသည် မြန်မာမင်းများ အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံနှင့် ကွဲပြားခြားနားစွာရှိပြီး တောင်းတန်း ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး၊ ပြည်မ ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး အဖြစ်ခွဲခြားထားသော်လည်း ပိုမိုထိရောက်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားဖြင့် ချိန်ညှိလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် ယဥ်ကျေးမှုသွပ်သွင်းခြင်း နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို တပြိုင်နက်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ ဖန်တီခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးအရွေ့တချို့အား ဖန်တီးခဲ့သည်။
ကိုလိုနီခေတ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများသည်လည်း အမျိုးသားရေးစိတ်အားအခြေခံ၍ စတင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ကြီးမားသည့် အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည့် တို့ဗမာအ စည်းအရုံ၏ ဗမာပြည်သည်တို့ ပြည်၊ ဗမာစာသည် တို့စာ၊ ဗမာစကားသည် တို့စကား၊ သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ စသည့် ကြွေးကြော်သံများသည် လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ထင်ရှားသည်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံး၏ ကျယ်ပြန့် မှု မှာ ပြည်မဒေသအုပ်ချုပ်ရေး နယ်မြေများတွင်သား ဖြစ်၍ တောင်တန်းဒေသအုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်းတွင်မှုမတွေ့ရှိရ ပေ။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်ရှေ့တွင် သခင်ဟူသည့် စကားလုံးထည့်သွင်း သုံးစွဲခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်များထက် ပိုမိုမြင့် မြတ်သူများ ဟူသည့် အတွေးအခေါ်ကို ဗမာလူထုထံ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးခေတ် သီချင်းများတွင် ဗမာလူမျိုး ၏ မြင့်မြတ်ပုံများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအား ချီးမြှောက်ဖွဲ့ နွဲ့ခြင်းများ၊ ရှေးစစ်ပွဲများတွင် ဗမာတို့အနိုင်ယူခဲ့ဖူး သည့် စစ်ပွဲများအကြောင်း ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။ ယိုးဒယား၊ ကုလား စသည့် လူမျိုး အမည်များကိုပါ ထည့် သွင်းသုံးစွဲခဲ့ရသည်။ တို့ဗမာ အစည်းအရုံး အမည်၏ ဗမာ ဟူသောစကားရပ်၏ ရည်ညွှန်းချက်အဖြစ် ယနေ့ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည့် လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံအား ရည်ရွယ်သည်ဟု နောက်ပိုင်းရှင်းလင်းချက်များ ရှိသော်လည်း တို့ ဗမာ အစည်းအရုံး မှတ်တမ်းများအရ ၎င်းခေတ်တွင်မှု သခင်နာမည် ခံသူများတွင် ယနေ့ခေတ်တိုင်းရင်းသားအ မည်များ ထင်ရှားစွာမတွေ့ ရှိရခြင်း၊ (လွတ်လပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများတွင် ယနေ့ခေတ် တိုင်းရင်း သားတို့နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သည်ကို တွေ့ရခြင်းမရှိပေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သည့် အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ခဲ့ သော်လည်း အရေအတွက်နည်းပါးစွာ ပါဝင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။
အာရှတိုက်သာတူညီမျှရေး ခေါင်းစဥ်အောက်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး ဥရောပနိုင်ငံများဆန့် ကျင်ရေးမှာ ဘုံသဘောတူညီချက်အဖြစ် စွဲကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဂျပန်ခေတ်အတွင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ကရင်-ဗမာ အထိကရုဏ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကရင်လူမျိုးများသည် အင်္ဂလပ်တပ်တွင် ဝင်ရောက်အမှု ထမ်းဆောင်သူများ ဖြစ်၍ အလိုတော်ရိများ ဖြစ်ကြသည်ဟူ သည့် ကောက်ချက်အပေါ်အခြေခံ၍ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရက်အနည်းငယ် အတွင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး အခြားကြီးမား သည့် လူမျိုးရေးဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ ထပ်များဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲ ဂျပန်တို့၏ အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးအတွေး အခေါ်၏ ဖိစီးနှိပ်စက်မှုအောက်မှ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် လှုပ်ရှားခဲ့ ကြသည်။ ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး – ဖတပလ အမည်ဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး နောင်အနာဂတ်တွင်လည်း နာဇီဝါဒ၊ ဖက်ဆစ်ဝါဒတို့ကဲ့သို့ အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်အတွေးအခေါ်များ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာမှုအား ဟန့်တားရမည်ဟူသည့်အမြင်ဖြင့် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး – ဖဆပလ ဟူသည့်အမြင်အား ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အမျိုးသားရေးဝါဒအစွန်း ရောက်မှုအား ဆန့် ကျင်ရမည်ဟူသည့် အတွေးအခေါ်အား ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရသည့် အခိုက်အတန့်ဖြစ် သည်။
တွင်ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအား နိုင် ငံတော် ဘာသာအဖြစ် ပြဌာန်းမည်ဟူသည့် ဆွဲဆောင်မှုသည် နိုင်ငံရေး အာဏာကို ဘာသာရေးမက်လုံးဖြင့် ထိန်း ကြောင်းရယူရန် အဆိုးဆုံးကြိုးစားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အများစုဗုဒ္ဓဘာသာများ အား “ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်” ဟူသည့် မက်လုံးဖြင့် သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ ပြည်တွင်းစစ် ကနဦးကာလမှ စတင်၍ ဘာသာရေးအသုံးပြု နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဝါဒဖြန့်ချီမှုများ၏ အကျိုးဆက်သာဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးရအပြီး ၁၂ တာ ကာလအတွင်းမှာပင် မြန်မာပြည်သူလူထုအား နိုင်ငံရေးဖြစ် စဥ်များအပေါ် ဘာသာရေးမှချဥ်းကပ်ရှုမြင်သည့် အလေ့အထအား နိုင်ငံတော်အဆင့် အရင်းအမြစ်သြဇာအား သုံးစွဲ၍ အောင်မြင်စွာ သွပ်သွင်းခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ သာသာဝင်တို့၏ ဘာသာရေးအပေါ် အားသာချက်တခုအဖြစ် တွေးခေါ်ဆောင်ရွက်မှုများ တစတစ ထွန်းကားလာ ခဲ့ပြီး အိမ်ရှင်ဧည့်သည်၊ လူများစု လူနည်းစု စသည့် ခံယူချက်များ အားကောင်းလာခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအားအခြား ဘာသာတရားများထက် မြင့်မြတ်သည့် ဘာသာအဖြစ်ခံယူသည့် ထုံးစံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာလူများစုအသိုင်းအဝိုင်း တွင်ကျယ်ပြန့်စွာတည် ရှိလာခဲ့သည်။ လူနည်းစုအခြားဘာသာဝင်တို့တွင်လည်း ဘာသာရေး အပေါ် အခြေခံကာ ဒုတိယနိုင်ငံသားများသဖွယ် တွေးခေါ်နေထိုင် လာသည့် အစုနှင့် ဘာသာရေး တန်းတူညီမျှမှု အပေါ် ရပ်ခံတိုက်ပွဲ ဝင်သည့်အစု အဖြစ်ကွဲပြားမှုမျာ တစတစ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် စစ်ဘောင်အကျယ်ဆုံးကာလဖြစ်ပြီး လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ မကြာခန ဖြစ်ပွားသည့် ကာလဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးလမ်းစဥ် အမှားအယွင်းများကို အထိန်းအထေအဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေး အခေါ်များအား ပိုမိုသွပ်သွင်းလာခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ နိုင်ငံတော် သံဃာမဟာနာယကအဖွဲ့အား ဗုဒ္ဓဘာသာ‌နှင့် ပါတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များပြုလုပ်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ နိုင်ငံ ရေးရည် ရွယ်ချက်များ အတွက် ဘာသာရေးအသုံးချမှုကို ပိုမိုပြုလုပ် လာခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံရေးအရ မကျေလည်မှုများ အတွက် တရုတ်- မြန်မာ အထိကရုဏ်ကို လည်းကောင်း၊ မဆလပါတီအား ပြည်သူလူထု၏ မကျေနပ်မှုမြင့်တက်နေချိန်တွင် ပြည်၊ တောင်ကြီးတို့၌ အစ္စ လာမ် ဘာသာဝင်များအား ဦးတည်တိုက် ခိုက်သည့် ပဋိပက္ခများကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင်လည်း နဂါး မင်း စစ်ဆင်ရေးအမည်ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာများအား ရည်ရွယ်သည့် နယ်မြေရှင်းလင်းမှုစစ်ဆင်ရေး တရပ် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လူတံတိုင်းကာရံရန် အစီအမံများကိုလည်း ပြစ်ဒဏ်ကျ အကျဥ်းသားများအား နေ ရာချထားရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။
နဝတ/နအဖ လက်ထက်တွင် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကိုဦးတည်ဖိနှိပ်မှုများပိုမို ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံ တကာ အစိုးရများနှင့် ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားတက် ကြွသူများအကြား ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းခဲ့သည်။ နအဖ/နဝတ အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများကို နှိပ်ကွပ်တာမြစ် ရန်အတွက် ပြည် တွင်းအတိုက်အခံများကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသည်မျှမက၊ အတိုက်အခံ တို့၏ လှုပ်ရှားမှုများသည် ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ခြင်းဆိုသည် ယုတ္တိကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ ပြည်ပနိုင်ငံများကို လည် မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကာ နယ်ချဲ့ရန် ရည်ရွယ်ကြသူများအဖြစ် ပုံဖော်ဝါဒဖြန့်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်း ဒီမိုကရေစီအရေးလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများ အား အမျိုးသားသစ္စာဖောက်လုပ်ငန်းများအဖြစ် နိုင်ငံ ပိုင်မီဒီယာများကို အသုံးချပုံဖော်ခဲ့သည်။
နဝတ/နအဖ ခေတ်တွင် ကရင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံဖက်သို့ နေရပ်စွန့်ခွါထွက်ပြေးသူနှုန်း မြင့်တက်လာသကဲ့သို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောဒေသတွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာတို့ နေရပ်စွန့်ခွါမှု များဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဘာသာရေးကိစ္စများအား နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် အသုံးပြုမှုမြှင့်တက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ကို ပုံဖျက် နှိုးဆွကာ တိုင်းပြည်၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီ အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုများအား လွှမ်း မိုးနိုင်ရန်ကြိုးစား ခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်များအစား နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ်ပြားများ ပြောင်းလဲထုတ်ဝေခဲ့ပြီး မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သူများအတွက် မှတ်ပုံတင်ရရှိနိုင်မှုကို ပိုမိုတင်းကြပ်ခဲ့သည်။ တ ရားဝင် စာဖြင့်ထုတ်ပြန်ထား ခြင်းမရှိသော်လည်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်တွင် ဖော်ပြရန်လို အပ်သည့် လူမျိုး၊ ဘာ သာနေရာတို့တွင် ဗမာ/ဗုဒ္ဓဟု ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် တွန်းအားပေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အင်ဂျင်နီယာပညာ၊ ဆေး ပညာသင်ကြားရန် စစ်တက္ကသိုလ်များ၊ ကောလိပ်သိပ္ပံများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်အဆင့် စစ်ကြောင်းအား လုံးတွင် အစ္စလာမ်၊ ခရစ်ရှန် နှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ ဝင်များအား ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသာ ဝင်များကြီးစိုးသည့် တပ်မတော်အဖြစ် ပုံဖော်လာခဲ့သည်။
ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးပြဿနာများ အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွား သကဲ့သို့၊ အစိုးရမှကြီးမှုးကျင်းပသည့် အနောက်နိုင်ငံဆန်ကျင်ရေး လူထုထောက်ခံပွဲများ အကြိမ်များစွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာအဝန်းအဝိုင်း ၏ မြန်မာ့ဒီမိုကရေးစီအရေးအပေါ် တပ်မတော်အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ဖိအားများ၊ အရေးယူမှု များမြင့်တက်လာချိန်၊ ကုလသမဂ္ဂကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရေးယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ချိန်၊ အစီရင်ခံစာများထွက်ပေါ်ချိန်တွင် အစိုးရဦးဆောင်သည့် ပြည်ပနိုင်ငံ ဆန့်ကျင်ရေး လူထုအစည်းအဝေးပွဲများကို မြို့တိုင်နီးပါးကျင်း ပခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး ရေချိန်မြှင့်တက်ချိန်မျိုးတွင် နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အဖြစ် ဘာသာ ရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း များကို ကောလဟာလများ ထုတ်လွှင့်ဖြန့်ချိကာ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ကျင်းပ သည့် လူထုထောက်ခံပွဲများသို့ တက်ရောက်ရန် နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲများမှ တဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ အရပ်သူအရပ်သားများအား သက်ဆိုက်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှ လည်း ကောင်း အတင်းအကြပ်တက်ရောက်ရန် အမိန့်ပေးခေါ်ယူခဲ့ပြီး ထိုပွဲကျင်း ပသည့် သတင်းအား နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများ တွင် ခေါင်းကြီးသတင်းများ အဖြစ် တခန်းတနားအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ အစိုးရကိုယ်တိုင် ဖန် တီးပြုလုပ်သည့် လူထုအစည်းအဝေးပွဲများမှ ကြိုတင်စီစဥ်ပြီးဖြစ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ကြွေးကြော်သံဆောင် ပုဒ်များကို ချမှတ်လေ့ရှိသည်။ နအဖ ခေတ်တွင် ထင်ရှားလှသည့် “ပြည်သူ့သဘောထား” အချက်များ၊ ပြည်ပဆန့် ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများ၊ ပြည်ပမီဒီယာများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကြွေးကြော်သံများသည် ထိုသို့လူထုအစည်း အဝေးအတု အယောင်များဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကောလဟလ ဖြန့်ချိမှု နောက်ထပ်ပုံစံတမျိုးမှာ အမျိုးသားရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်း ပါများ၊ စာတမ်းများကို တရားမဝင် ထုတ်ဝေသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် အမေရိကန် နိုင်ငံတိုက်ခိုက်ခံရမှု အပြီးတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုပြုလုပ်လာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အစ္စလာမ်ပြုမှု၊ ဂျီဟတ် စသည်တို့ နှင့် ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဝင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ဝါဒဖြန့်မှုများ ပြု လုပ်ခဲ့သည်။ အစ္စလာမ် များသည် ဘာသာခြားများနှင့် အိမ်ရာထူထောင်ခြင်းမှ တဆင့် အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ သွပ် သွင်းခြင်း လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သဘောတရာများ ဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ အနေဖြင့် ဘာသာခြား အမျိုးသမီးများအား အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် ရယူနိုင်ပါက အစ္စလာမ်နိုင်ငံများမှ ဘွဲ့အလိုက် ဆုငွေ (သို့) ထောက်ပံ့ကြေး များပေးကြောင်းဝါဒဖြန့်ချိမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သတိထားဖွယ်အချက်မှာ တပ်မတော် အနေဖြင့် အိမ်ထောင် ဖက်များ အပေါ်အခြေခံတွက်ချက်မှု စနစ်အပြောင်းအလဲအဖြစ် တဆင့်မြင့်ရာထူးများ၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ရန်အတွက် တက်ရောက်ရန် လိုအပ်သည့် သင်တန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင် အိမ်ထောင်ဘက်၏ ဘွဲ့အ မျိုးအစား၊ ဘွဲ့ရရှိချင်းရှိမရှိ ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများ ပြုလုပ်လာခဲ့ သည်။ ထို့အပြင် တပ်မတော်အရာရှိများ အနေဖြင့် ဘာသာြခားနှင့် ဘွဲ့မရရှိသူ ( တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း မအောင်မြင်သူ) များနှင့် လက်ထပ် ခွင့်တင်ခြင်းအား ခွင့် မပြုခြင်းများ၊ ဘာသာခြား (သို့) ဘွဲမရရှိသူများ နှင့် အိမ် ထောင်ပြုခဲ့သည့် တပ်မတော်အရာရှိများအား အရပ်ဖက်ဌာန များ zသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ တပ်မတော်အတွင်း ကာလ ကြာ ရာထူးဆိုင်း ငံ့ခြင်းများကို လည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နအဖ ခေတ်တွင် လူမျိုးရေး/ဘာသာရေးခွဲခြားမှုများကို တပ်မတော်အပါအဝင်အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများတွင် စနစ်တကျကျင့် သုံးခဲ့သည် ကိုတွေ့ရသည်။ နိုင်ငံတော်ပိုင် မီဒီယာမျာ၊ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များ၊ သတင်း ပေးများ၊ တရားမဝင် စာအုပ် စာတမ်းဖြန့်ဝေခြင်းများ စသည့်တို့မှ တဆင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများတွင် နိုင်ငံခြားဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားရေးနှင့် ဘာသာရေးအဆိုအမိန့်များကို ပုံမှန်ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ကျန်ဝါဒဖြန့်ချိရေးပုံစံ များကို ပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်စေလိုသည့် အချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ လူထုအားအကြောက်တရားဖြင့် မလုံခြုံသည့် ခံစားချက် လွှမ်းမိုးစေ လိုသည့် အချိန်တွင်လည်းကောင်း စနစ်တကျမောင်းနှင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
တပ်မတော်အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲများအပေါ် ပိုမိုခွဲခြား ဆက်ဆံမှုများ ပြုလုပ်လာသကဲ့သို့ ၊ လက်မှတ်မထိုးရ သေးသည့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ထိုးစစ်များဆင်နွှဲခြင်းကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာ ခဲ့သည်။ ရခိုင်ဒေသ တွင်လည်း မျှတမှုမရှိသည့် တည်ဆဲဥပဒေများကိုကိုပင် ပိုမိုဆိုးရွားစွာ ကိုင်တွယ်ကျင့် သုံးခဲ့သည်။ ပြည်ပမီဒီယာများ၏ ဖော်ထုတ်မှုများ ကြောင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ရခိုင်ဒေသ၌ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ သည့်အမှုများ အတွက် အရေးယူခဲ့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း တဖက်တွင် တပ်မတော်သည့် ဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံကိုကာ ကွယ်နေ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အရေးယူခံရသည့်သူများမှာလည်း အမျိုးသားရေး၊ အချုပ်အခြာတည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးတို့အတွက် စွန့်လွှတ်ကာလုပ်‌ ဆောင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြောင်း ဝါဒဖြန့်ချီမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပြည်တောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါအဝင် ပါတီအချို့သည် အမျိုးသားရေးလှိုင်းအား အသုံး ချ၍ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေးသြဇာထူ ထောင်နိုင်ရန်အတွက် စုဖွဲ့လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနှင့် ပါတီအချို့မှလွဲ၍ ပါတီအများစုတွင် ခေါင်းဆေင်ကြသူများမှာ တချိန်က စစ်အာဏာရှင်စနစ် အား ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီး လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုများအတွက် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံ ခဲ့ရသူ၊ ဖမ်းစီးနှိပ်စက်ခံခဲ့ရ သူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက် အင်အားစုများမှတဆင့် လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ထောက်ခံမှု ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်အသီးသီးအားအခြေ ခံသည့်စုဖွဲ့မှုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတ ကာအရေးယူမှုများအပေါ် တုံပြန်သည့်ကြေငြာချက်များ ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ အမျိုးသားရေးအစွန်း ရောက်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကို လူအများမြင်ကွင်းတွင် လည်းကောင်း၊ မျက်ကွယ်တွင်လည်း ကောင်း သီးခြားစီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ အမျိုးသားအစွန်း ရောက်အဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ – မဘသ အား အရေးယူတားမြစ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခြင်းအား ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ပါတီအနေဖြင့်လည်း အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရန်ခိုင်မာသည့် မူဝါဒအသင့်မဖြစ်မှုကို ထင်ရှာစွာတွေ့ရသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အမျိုးသားရေးဝါဒအား စျေးပေါသည့် လက်နက်တခုသဖွယ်အသုံးချ၍ နိုင်ငံရေး အာ ဏာတည်ဆောက်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းကြား၌ ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နေရပြီး ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလ အတွင်းကျင်းပခဲ့သည့် ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်၍ အစိုးရမီဒီယာများမှတဆင့် မဲဆွယ်စည်းရုံး မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပါတီ ၂၂ ခုအနက် ကွဲပြားဆုံလင်မှု အပေါ်ရပ်ခံ၍ စည်းရုံးသည့်နိုင်ငံရေးပါတီ ၆ ခုသာပါဝင်ခဲ့ပြီး လူနည်းစုတိုင်းရင်းသား အခြေပြုဖွဲ့စည်းသည့် ပါတီ ၅ ခုနှင့် ပြည်မအခြေစိုက်ပါတီ ၁ ခုသာပါဝင်သည်။ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် အမျိုးသားရေးစကား လုံးများအားအသုံးပြု မဲဆွယ်ခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်း ၂၀၁၈ ခု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပချိန်တွင် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမြို့နယ်များရှိပျက်စီးလျက်ရှိသော ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းများပြု ပြင် ရန်အတွက် အစိုးရအဖွဲ့မှ လှူဒါန်းမှုကို ပါတီ၏မြို့နယ်ဥက္ကဌ္ၒအား ကိုယ်စား သွားရောက်လှူဒါန်းစေခဲ့ပြီး နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမှာလည်း သွယ်ဝိုက်သည့်နည်းဖြင့် ဘာသာ ရေးအား ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အသုံးပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့်အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်အဖွဲ့ဖြစ်သည့်မဘသအား တားမြစ်ရန်ကြိုးစားမှု အဖြစ် နိုင်ငံတော် သံဃာ့ မဟာနာယက အဖွဲ့၏အားဖြင့် အမိန့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖျက်သိမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့ သော်လည်း လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မှုတိကျသည့် အမိန့်မူဝါဒတို့ဖြင့် ဆောင် ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အခြားသတိပြုရန် အချက်မှာ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဖြစ်သူ တပ်မ တော်အရာရှိဟောင် သူရဦးအောင်ကို၏ ရိုဟင်ဂျာများကိုသာမက မြန်မာမွတ်စလင်များအပေါ် ရည်ရွယ်သည့် ခြိမ်းခြောက် စကားများသည် အစိုးရအဖွဲ့၏ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး သဘောထားကို စောင့်ကြည့်သရုပ်ခွဲမှု လုပ် ဆောင်ရန် လိုအပ်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာပညာရှင်များပါဝင် သည့် အကြံပေးအဖွဲ့များ၊ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့များကို အစိုးရမှဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော်လည်း တပ်မတော်၏ သဘော တူညီမှုမရှိသည့်အတွက် ၎င်းအဖွဲ့များ၏ အကြံပြုချက်များ၊ တွေ့ရှိချက်များကို ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိ ဘဲ နိုင်ငံတကာဖိအားလျော့ကျရန်သာ ဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့ သာရှိသည်။
ပြည်တွင်းမီဒီယာများအနေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာအရေးနှင့် ပတ်သက်၍သော် လည်းကောင်း ပြည်တွင်းစစ်နှင့် ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း သတင်းများဖော်ပြရာတွင် တပ်မတော်မှသုံးစွဲစေလိုသည့် စည်းမျည်းများကို လိုက်နာ၍ သုံးစွဲခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ရိုဟင်ဂျာ ဟူသည့်စကားလုံးမှာ “ရခိုင်သား” ဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိ ပြီး တိုင်းရင်းသားဖြစ်လိုသည့် အတွက်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပြီး “ဘင်္ဂလားသား” ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်ရသည့် အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်တို့၏ ဝါဒဖြန့်ချိမှုရှိခဲ့သည်။ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်မီဒီယာများတွင်လည်း ဘင်္ဂါလီ ဟူသည့်စကား လုံးကိုသုံးစွဲခဲ့သည့် နည်းတူ ပြည်တွင်မီဒီယာ အများစုသည်လည် ဘင်္ဂါလီ ဟုသာသုံးစွဲဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ ထို့ အပြင် ဘာသာမတူသူများအကြားဖြစ်ပွားသည့် မှုခင်းများကို ဖော်ပြရာတွင်လည်း လိုအပ်ချက်မရှိပဲ ၎င်တို့၏ ဘာသာများကို ပူးတွဲဖော်ပြခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် လူနည်းစုဆန့်ကျင်ရေး ဆောင်းပါးများ၊ ကာတွန်း များ၊ သတင်းဆောင်းပါများကိုလည်း ဖော်ပြလာခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယခင်က လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေ စီအရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ထူထောင်ခဲ့ကြသည့် မီဒီယာများသည်ပင်လျှင် လူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားမှုများအား ကာကွယ်ရန် ပျက်ကွက်မှုအား ကျူးလွန်လျက်ရှိကြသည်။
အမျိုးသားရေးဝါဒ အားကောင်းလာမှုနှင့်အတူ မြန်မာလူမျိုးကြီး ဝါဒသာမက သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသား အသီးသီးတို့တွင်လည်း အမျိုးသားရေးဝါဒကြီးစိုးလာမှုများကို တွေ့ရသည်။ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာများ ဖော် ထုတ်မှုတို့ ကို ပြုလုပ်လာကြသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရခိုင်လွတ်လပ်ရေးဆုံး ရှုံးမှုအခမ်းအနားကို ကျင်းခဲ့ပြီး ၎င်း မှာ မြန်မာဘုရင်၏ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုတွင် ထိုအခန်းအနားအား ကျင်းပခွင့်အား တာမြစ်ခဲ့ပြီး အစိုးရနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအကြား ပဋိပက္ခများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ထိုပဋိပက္ခ များတွင် ပစ်ခတ်ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ လူပေါင်းများစွာ ဖမ်းစီးခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့အပေါ် တရားစွဲဆိုမှုများ ယခုအချိန်ထိ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး တရားစွဲဖြစ်စဥ်တွင်လည်း တရားမဲ့မှုများ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
အမျိုးသားရေးဝါဒ၊ လူမျိုးကြီးဝါဒတို့ အားအသုံးချ၍ လူနည်းစုဘာသာခြားများအား ဓါးစာခံသဖွယ်ပြုမူ နေမှုများအား ဖြစ်စဥ်တခုချင်းစီအရ အသေးစိတ်လေ့လာပြီး အမျိုးသားရေး ဝါဒအခြေခံ အတွေးအခေါ်ပုံသွင်း ဖန်တီးမှု တခုလုံအား ဆက်စပ်ပုံဖော်ရန် လုပ်ဆောင်ရမည်။အမျိုးသားရေး၊ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာလုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း လက်တွေ့တွင် လူမျိုးကြီးဝါဒ နှင့် တပ်မတော်၏ အာဏာဝေစုခိုင်မြဲရေးအတွက် သာရည်ရွယ်ပြုလုပ်နေကြောင်း သက်သေပြနိုင်မည့် သုတေသ နစာတမ်းများ ထွက်ပေါ်လာရန်လုပ်ဆောင်ရမည်။
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် ရိုဟင်ဂျာပြဿနာနှင့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် ပြည်တွင်း စစ်မှာ မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့မှ ယူဆထားသကဲ့သို့ အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပြဿနာ မဟုတ်ဘဲ နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ယဥ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တရာမမျှတမှုတို့အား ဆန့်ကျင်ရုန်းကန် သည့် လှုပ်ရှားမှု များမှပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိကျင့်သုံးလျက် ရှိသည့် အစိုးရ၏ ပြန်လည်လက်ခံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်များ အပေါ်သဘောထားများအရ ပြန်လည် လက်ခံရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရည်မှန်း ချက်များ ပြည့်ဝနိုင်ဖွယ်မရှိပေ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း နေရပ်စွန့်ခွာမှုများ စတင်ခဲ့ပြီး ယခုတိုင်မိမိတို့ ဒေသသို့ ပြန် လည် အခြေချနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့် ဒုက္ခသည်များမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သိန်းပေါင်း များစွာ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် နေထိုင်ရသူများအနေဖြင့် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဥ်ကျေးမှုစသည့် အခြေခံ အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံရသည့်ကာလာ ကြာမြင့်သည်နှင့်အမျှ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုများ လျော့ကျခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်း စသည့် အခြေအနေများအပေါ်အခြေခံသည့် တုံ့ပြန်လှုပ်ရှားမှုများ အချိန်မရွေးပေါ်ပေါက်နိုင်သည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ ပညာသင်ကြားရန်အခွင့်အရေးနှင့် ဝေးကွာနေသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံရှိ ဒုက္ခသည်လူငယ်ထောင်ပေါင်းများစွာသည် အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ စည်းရုံးရေးပစ်မှတ်ဖြစ်နေနိုင် သ ကဲ့သို့ ၎င်းတို့လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတ ခုလုံး တန်းတူညီမျှမှုရရှိရေးနှင့်လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုအတွက် လည်း ကြီး မားသည့် အခြေခံအင်အားစုအဖြစ် ရှိနေပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံအချက်များ အရပင်လူသားမျိုးနွယ်တခု အနေဖြင့်ရသင့်ရထိုက်သည်များကို ကျော်လွန်၍ အရေးတကြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်သင့်သည်များကို မပြုလုပ်ပဲ သမိုင်းရေးငြင်း ခုန်မှုများ၊ အယူဝါဒကွဲပြားမှုများ၊ လူမျိုးရေးအခြေခံမုန်းတီးမှု များစသည့် သတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ သ ဘောမတူညီ မှုများနှင့် ချဥ်းကပ်ဆောင်ရွက်နေသမျှ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာသည် အချိန်မရွေး ပေါက်ကွဲနိုင်သည့် ပြ ဿနာ တရပ်အဖြစ်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်။